Nezvedu - ORION INDUSTRY UYE KUTengeserana KAMPANI YAKADZIDZWA
Zvese zvaunoda kuti uzive nezve Yedu Orion Indasitiri uye Trade Co, Ltd. tafura yekudyira
Kamuri yekudyira ndipo panogara vashanyi vako uye vanogoverana chikafu chakakosha nemhuri. Tafura yekudyira hapana mubvunzo kuti ndiyo yepakati pekudyira. Kutenga tafura yekudyira nyowani chiitiko chemunhu zvakanyanya nekuda kwezvikonzero zvakawanda. Kune akawanda masitaera uye zvigadzirwa kunze uko mumusika.
"Chitaera Chemazuva Ano"
Dhizaini yazvino inogona kuoneka mune akasiyana siyana kutaridzika, chero bedzi ivo vachireva zvine mutsindo "yeazvino," kusvika zvinoenderana nekuonekwa. Tafura dzemazuva ano dzinogona kuwanikwa mumhando dzese dzezvinhu uye zvese zvigadziriso. Mune yedu Orion Indasitiri uye Kutengesa isu takagadzira hwakawanda hwakawanda hwazvino dhizaini nezvinhu zvakasiyana zvinosanganisira girazi, machena, huni, MDF, nezvimwe. Yedu yepamusoro yakarongedzwa yazvino tafura yekudyira dhizaini seti yematafura tafura ine marble kana pamusoro pehuni uye inoshamisa gumbo. dhizaini.
Chimiro chemazuva ano chinoburitsa musanganiswa unonaka wekushandisa uye aesthetics iyo yakabudirira kutanga muzana ramakumi maviri. Inowanzo kuve nemapapiro semitsara yakachena uye makona akapinza. Iko kushandiswa kwezvinhu zvitsva zvakaita segirazi, machena kunounza kutaridzika kwemazuva ano uye zvinoita kuti zvive nyore kuenderana neimba yako.
Kutaura nezveScandinavia fenicha dhizaini, izwi rekutanga rinouya mupfungwa dzangu nderechisikigo. Tafura yekudyira yekuScandinavia inowanzo kuve yakajeka, yakanaka uye yakasununguka. MaScandinavia matafura ekudyira anogadzirwa kubva kumatanda akanaka semuouki, walnut kana madota, anowanzo sanganiswa nemhando dzekupedzisa kana makumbo esimbi. Ine minimalist uye yakachena chimiro, matafura ari nyore, anoyevedza uye anokwana zvakakwana mune zvemukati zvemukati.
Rustic dhizaini inoshandisa isina kuvezwa huni mune yakasikwa pfungwa; maoko-akavezwa maumbirwo eakareruka, kumashure-kune-echisikanzwa manzwiro ayo anoita kuti rive rakakurumbira mumakabheji uye dzimba dzemumba.
Kunyangwe iri 2017, yemaitiro echinyakare ichiri nzira yakajairika iwe yaunowana mumusika wetafura yekudyira. Iyo inowanzo kuuya neakavezwa zvakavezwa huni, zvakadzama magadzirirwo, uye hupfumi hwakakura. Kana iwe uri munhu anofarira zvechinyakare, zvirokwazvo ndicho chisarudzo chako chakanakisa, ngatitorei Orion Indasitiri uye Trade ive yako yekutanga sarudzo.
Nyika irikunakirwa nezvakanakira shanduko yeindasitiri. Saka ita maindasitiri maitiro ave akakurumbira mukugadzirwa kwemukati. Iko kusanganiswa kwehuni nesimbi kunounza kutaridzika uye kunzwa kwemuchina wefekitori uye maturusi.
Dhizaini yemahombekombe idingindira rekushongedza rakafuridzirwa nefenicha yakashongedzerwa uye maaccence anowanikwa mumisha yechinyakare yemahombekombe. Inobatanidza kupenya kwakachenuruka, mimvuri yebhuruu uye zvemumvura zvinhu zvakaita semakambasi, hupenyu hwemumvura, zvimiso, uye maheu.
Shaker yemaitiro fenicha ficha yakasarudzika yemidziyo yakagadzirwa neUnited Society yeVatendi Mukuonekwa kwaChipiri kwaKristu, inowanzozivikanwa seShakers, chinamato chechitendero chaive nemitemo yekutungamira yekureruka, yekushandisa uye kutendeseka. Zvitendero zvavo zvairatidzwa nemidziyo yakagadzirwa nemagadzirirwo mashoma. Furniture yakaitwa uchifunga, uine unoshanda fomu uye chikamu. Cherry, maple kana pine matanda ndizvo zvakajairika zvinhu.
Cottage fanicha ndeyechokwadi kune yechiVictorian chimiro mune iyo mibhedha ine yakakwira (yakawandisa yemamita matanhatu kana kupfuura) uye yakashongedzwa zvine musoro mabhodhi epamusoro. Kune kumwe kuvezwa, kazhinji muchimiro chemhedzisiro uye medallion, asi mazhinji ekushongedza aive akapendwa. Maruva, michero, uye zvimwe zvirimwa ndizvo zvainyanya kufarirwa zviine hombe-yakapetwa-senge medallion mune yepakati pabhodhi pamusoro weboardboard uye diki, inoenderana imwe pabhodhi retsoka.
Lantern yekushongedza, mwenje yezuva, akatungamirira mwenje, mwenje pendant mwenje, simbi yemadziro art, Bindu Kushongedza Simbi,